Isamsung ityhila idatha entsha kwifowuni yokusonga | I-Androidsis
Isamsung iqinisekisa idatha entsha kwifowuni yokusonga kwi-CES 2019
Emva kwenkcazo yayo ngo-Novemba, sazi okuncinci malunga nefowuni enokusongelwa yeSamsung. Inkampani yaseKorea ngoku iseLas Vegas apho kubanjelwa khona i-CES 2019. Ngale ndlela, sikwazile ukufumana okungakumbi malunga nefowuni. Umnyhadala wabucala ubanjwe yinkampani yaseKorea, ekuthe kuyo kutyhilwa idatha eyahlukeneyo malunga nesi sixhobo. Enkosi kubo sele sifumana umbono wezicwangciso zabo.
Uninzi lwamathandabuzo malunga nale fowuni yokusonga yohlobo lwaseKorea lumalunga nokuqaliswa kwayo, ukongeza kumhla nokuba iya kumiliselwa kwilizwe jikelele okanye hayi. Ngethamsanqa, Lo msitho wabucala we-Samsung usishiyele ezinye iimpendulos ngale ndlela. Yeyiphi idatha entsha esiyaziyo ngoku malunga nefowuni?
Enye yeenkcukacha zokuqala ezaziwayo, enkosi kubaphathi abaninzi benkampani, kukuba le fowuni phantse ilungile. Kubonakala ngathi kukho izinto ezimbalwa ekufuneka zigqityiwe, ezinye izilungiso zokugqibela ukuze yonke into sele igqibelele. Iindaba ezimnandi, oko kuthetha ukuba sele isondele kancinci ekubeni semthethweni kwaye siyabona ukuba isebenza njani. Kodwa ayisiyiyo kuphela kwento eye yavuza kumnyhadala we-Samsung kule CES 2019 eLas Vegas.
Umhla wokumiliselwa kunye nokunikezelwa kwesi sixhobo kuhlala kuyenye yeemfihlelo eziphambili. Ekugqibeleni, esi sixhobo seSamsung siza kweli hlobo. Ke sinokubeka ihlobo le-2019 kwii-ajenda zethu. Kwelinye icala, kutyhilwe ukuba ifowuni iyabhitya xa ityhilwa kunokuba siyisonga ukuze isebenze njenge-smartphone. Nangona singenawo amanani ubukhulu bayo obuthile ngoku.
Kwakucingelwe ukuba i-Samsung icwangcise ukuvelisa iiyunithi ezinesixhobo esilinganiselweyo. Kubonakala ngathi kunjalo. Kuyatshiwo ukuba baya kuthengisa ngeenxa zonke 1 yezigidi zeefowuni emhlabeni jikelele. Kwakhona, ixabiso lefowuni alizi kuba ngexabiso eliphantsi, njengoko kulindelwe. Kule meko sele sinalo uqikelelo. Kulindeleke ukuba ijikeleze IRandi ye1339 Ixabiso. Asazi okwangoku ngexabiso lalo nge-euro, kodwa sinokufumana umbono.
Njengesixhobo esinexabiso eliphezulu, inkampani ijolise kubaphulaphuli abadala, ukusuka kwiminyaka eyi-40 ubudala kunye neengcali, ezinje ngeqela elinokuba nomdla wokuthenga le fowuni. Kukwimeko enjalo kuba yifowuni eyiyo yenzelwe abo bantu basebenzisa izinto ezininzi. Enkosi kwifowuni, ngekhe babenayo ipilisi ukongeza kwi-smartphone. Banokukwenza konke oko kwisixhobo esinye.
Isamsung ithi ilungisa imicimbi embalwa kwifowuni, ukuze ibekhona ukuze ithengiswe kweli hlobo. Ekugqibeleni sinomhla, otyhilwe yinkampani uqobo, wokufika kwesi sixhobo sisongelayo sivela kwinkampani yaseKorea. Iindaba ezimnandi, zokuba abasebenzisi bebelinde ixesha elide. Ukongeza, ngumhla osengqiqweni, kuba inkampani ayifuni ukuthatha ukubalasela koluhlu lweGPS S10, ekulindeleke ukuba zingeniswe kwi-MWC 2019 kwaye zeziphi kuvuza inkitha yedatha kwezi ntsuku.
Ukuthandabuza kunjalo Yintoni eza kwenzeka kwiGalaxy Note 10, owawuza kuthi thaca phakathi kuka-Agasti noSeptemba. Ayaziwa ukuba kuya kubakho utshintsho kolu cwangciso lwenkampani, edla ngokuba nemihla emiselweyo xa ibeka iifowuni zayo eziphezulu. Akukho nto ikhankanyiweyo malunga noku okwangoku. Ke kuyakufuneka silinde ithutyana de sazi ngakumbi ngayo. Kancinci kancinci sifunda ngakumbi ngale fowuni yokusonga evela kwi-Samsung. Iindaba ezabiwe yinkampani kwi-CES 2019 zisinika umbono ocacileyo malunga nale modeli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Isamsung iqinisekisa idatha entsha kwifowuni yokusonga kwi-CES 2019
uAlexander oliva garcia sitsho
"Ifowuni iyacekeka xa ityhilwe kunokuba siyisonge ukuze isebenze njenge-smartphone" njengelungelo elicacileyo?
Phendula u-alexander oliva garcia
I-WhatsApp izakuvumela ukuba uthumele iifayile zeaudiyo ezininzi ngaxeshanye
I-Hisense U30, ifowuni evezwe kwi-CES ngekhamera eyakhelweyo kwiscreen kunye ne-48 MP sensor